Waa maxay LinkedIn? | Martech Zone
Waa maxay LinkedIn?
Talaado, July 1, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waa maxay LinkedIn? Maxaad ugu biireysaa LinkedIn? Waa kuwan fiidiyow kale oo weyn oo laga helo dadka CommonCraft mowduucaas uun!
Igu xariir LinkedIn.
Tags: wicitaan ficilmallgatexarumaha xogta noloshashimbir yargeedi socodkaQoraalka
3 Shuruudaha lagama maarmaanka u ah Codsi kasta oo Webka ah
Jul 1, 2008 markay tahay 4:56 PM
Waad ku mahadsantahay wadaagida hordhaca weyn ee LinkedIn. Kuwa aan aqoon u lahayn barta, tan waxay sharraxaysaa wax fudud, cad, oo kooban. Lee iyo Sachi ee 'CommonCraft' waxay shaqo layaab leh ku qabtaan qaabkooda PaperWorks.
Waxa kaliya ee aan dhihi doono ayaa ah in LinkedIn aysan ahayn wax walba oo wax ku ool ah, inta badan, raadinta ama soo iibinta iibiyeyaasha. Habka ku xusan wuxuu kaa doonayaa inaad u riixdo baahidaada waqtiga aad haysato dadka laga yaabo ama laga yaabo inaysan haysan waqtiga ama tixraacyada adiga. At VendorCity, waan ka rognay howshan waxaanan weydiisaneynaa milkiilayaasha meheradaha iyo xirfadleyda inay talooyinkooda ku soo rogaan internetka. Habkaas, had iyo jeer waa la heli karaa waana la heli karaa xilliga ay baahida timaaddo. Kaliya maahan inaad markaa isla markiiba heli karto iibiyaha aad ubaahantahay markii loo baahdo, waxaad sidoo kale ku abaalmarinaysaa iibiyeyaasha wanaagsan ganacsi dheeraad ah qofkasta oo ka tirsan bulshada VendorCity.
By habka, maqaal kale oo wanaagsan oo ku saabsan isku xirka ganacsiga waxaa dhawaan soo daabacay milkiilaha ganacsiga UK B2B. Waxaa laga arki karaa halkan:
Douglas, waxaan rajeynayaa inaad daqiiqad ku qaadan doontid inaad wax ka iibsato VendorCity.com maaddaama aan u maleyneyno inay gebi ahaanba ka duwan tahay oo ka wanaagsan tahay habka loo sameeyo isku xirka ganacsiga iyo helitaanka iibiyeyaasha ugu fiican ee deegaankaaga. Ii dhig qadka haddii aad u malaynayso inaad adigu leedahay daqiiqad aad kaga sheekaysato fikradda.